घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू Houssem Aauar बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
हौसेम अवरको हाम्रो जीवनी उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, अभिभावक, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थ को बारे मा तथ्यहरु चित्रण।
सरल शब्दहरूमा, यो फुटबलरको जीवन यात्राको कहानी हो। यो उनको बाल्यकालदेखि सुरु भयो, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकालको जाँच गर्नुहोस् - हौसेम अउरको बायोको एक सारांश।
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ कि उहाँ दुबैमा जहरीला हुनुहुन्छ र प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट ह Hakim Ziyech। थोरै आश्चर्य, हन्सी फ्लिक प्रेममा परे र हौसेम अउरसँग उनको एफसी बायरन म्युनिक टोलीलाई सुदृढ पार्न कोसिस गरे।। प्रशंसकको बाबजुद, केहि थोरैलाई मात्र उनको पूर्ण जीवन कहानी थाहा छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Houssem Aauar बचपन कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उसले उपनाम "Houss" राख्छ। हौसेम औउर जून १ 30 1998 of को th० औं दिनमा उत्तरी अफ्रीकी आमा-बुबाको जन्म भयो, जो फ्रान्सको ओभर्ग्ने-रन्ने-आल्प्स क्षेत्रको राजधानी लियोनमा रहेको थियो।
कुनै श doubts्का छैन, हौसेम अउरकी आमाले बुढेसकालको कानूनलाई अशुद्ध पारेकी छ किनकि उनी young० को दशकमा भए पनि उनी धेरै जवान देखिन्छिन्। जे भए पनि फुटबलरले आफ्नो बुवालाई सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरेका छैनन्, लाइफबगर केहिको लागि खुशी छ। तपाईंलाई उसको एक लुकलिके अभिभावकको एक झलक दिन जुन उहाँ सबैभन्दा बढी संलग्न हुनुहुन्छ।
फ्रान्सको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो शहरी क्षेत्र मा हुर्केका, हामी Aauar नम्र शुरुआत छ थाहा छ। त्यसबेला, उहाँ अन्य बच्चाहरूसँग समय बिताउन रमाइलो गर्नुभयो जसले उनीहरूको जातीय भिन्नताको बारेमा कम ध्यान दिए।
शुरूबाट, हौसेमले विश्वास गरे कि उनले फुटबलमा ठूला चीजहरू गर्न सक्नेछन्। यो उनका साथीहरूका बीच साझा साझा सपनाको कारणले हो। आफ्नो बाल्यकाल सपनाहरु को बारेमा बोल्दै, जुन कहिल्यै पासिंग कल्पनामा रहन सकेन, प्लेमेकरले एक पटक फ्रेन्च प्रेसलाई भने।
“म लियोनमा अन्य बच्चाहरूसँगै रमाइलो गर्थें। फुटबल एक जुनून हो जुन हामी सबैमा साझा थियो। यसले हाम्रो परिवारको उत्पत्ति र राष्ट्रियतामा फरक भए पनि यसले हामीलाई एकजुट गरायो।
आज सम्म हामी आफ्नो मित्रतालाई पक्रिराख्छौं। यो छिमेकीको एक परिपूर्ण प्रतिबिम्ब हो जहाँ मेरा बाबुआमाले मलाई हुर्काउनुभयो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, एकता हाम्रो बल भयो। ”
Houssem Aoua परिवार पृष्ठभूमि:
उनको आमाले सम्मानित नर्सको रूपमा काम गरे भन्ने तथ्यले हाम्रा बाल्यकालमा उनको बच्चाको अभावको सामना गरेन। प्लेमेकर एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्किएको छ र बाल्यकालको कथालाई धनी बनाउन कुनै राग छैन। हौसेम अउरका आमा बुबाआमाको कमाईलाई धन्यवाद छ, उनका सम्पूर्ण परिवार माथि-औसत नागरिकका रूपमा आरामसँग बसे।
Houssem Aauar परिवार मूल:
सजिलैसँग उसको पुर्ख्यौल अनुमान गर्नका लागि, तपाईंले पहिले उहाँको नामको अभिलाषा गर्न सिक्नुपर्नेछ, जसले उनको अल्जेरियन मूलको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ। धन्यबाद, गोलले Houssem Aauar नाम कसरी राम्ररी उच्चारण गर्ने वर्णन गरेको छ.
उसको उत्पत्ति अल्जेरिया हो भन्ने सुनेपछि तपाईले सोच्न थाल्नु हुन्छ ... के यो अउर दन्त्यकथाको खण्डबाट आउँछन् Zinedine Zidane, वर्तमानमा उनी आफ्नो रोल मोडेल को हुन्?
निस्सन्देह, अल्जेरिया धेरै बहु-पक्षीय बोलीहरूको घर हो जुन तल उनीहरूको भाषा नक्सामा देखिएको छ। मानौं कि हौसेम अउरका बाबुआमाले उनलाई उत्तरी अफ्रिकी देशमा हुर्काए, उनले विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्न सिकेका हुनसक्छन्, खास गरी अल्जेरियन सहारण अरबी।
Houssem Aauar फुटबल कहानी:
बालबालिकालाई उसको प्यारो बनाउने कुरामा सोच्न यो ठूलो बुद्धिको आवश्यकता छ - केवल एउटा बच्चामा उनी आफूलाई माया गर्थे। यस नोटमा, Aauar को आमाले उनलाई AC Villeurbanne को स्थानीय फुटबल एकेडेमीमा भर्ना गर्यो जब उनी 8 वटा थिए।
एकेडेमीमा आफ्नो युवाको क्यारियर शुरू गर्नु कुनै ठूलो कुरा थिएन। अन्य अल्जेरियन-फ्रान्सेली आप्रवासीहरूको मनपर्दो पनि - (जस्तै निबिल फेक) - उनीहरूको फुटबल अभियान त्यहाँ शुरू गर्न सुविधाजनक भयो।
त्यतिखेर, अउर एकेडेमीमा अन्य बच्चाहरूको भन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेर आफ्ना अभिभावकहरूलाई गर्व गर्ने बारेमा बढी चिन्तित थिए। अवश्य पनि, त्यस केटाले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई मात्र उत्साहित गरेन तर आफ्ना प्रशिक्षकहरूलाई पनि खुशीको क्षणमा फ्याँकिदिए। एसी Villeurbanne संग उनको सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षण एकेडेमी को प्रसिद्ध ट्राफिहरु को एक जीत मा टीम लाई मद्दत रहन्छ।
ओलम्पिक लिओनाइसको यात्रा:
एडिडासको निरन्तर मद्दतको साथ, आगामी मिडफिल्डरसँग उसले आवश्यक किट्स अनुरूप कुनै समस्याहरू भएन। विलुरबन्नेमा तीन वर्ष आफ्नो प्रतिभा पालन पोषण पछि, Aauar आफ्नो टीमका साथीहरूलाई बिदाई। उनी २०० in मा ओलम्पिक लिओनाइस एकेडेमीमा गए।
स्पष्टतः, उनका आमाबुबा लेनको ठूलो घरमा एघार वर्ष पुरानो हुन भन्दा पहिले धेरै तनावको सामना गर्नु परेको थियो। आफ्नो नयाँ एकेडेमीमा अधिक उन्नत सुविधाहरूमा पहुँच गर्न सक्षम हुँदै, औरले ड्राइबिंगमा आफ्नो स्वभाव र प्राविधिकता पूर्ण गर्नमा काम गरे। कडा परिश्रम र उनका प्रशिक्षकहरूको उत्तम मार्गदर्शनको साथ, प्रशंसनीय प्रतिभा आफ्ना साथीहरूको भन्दा माथि उत्रियो।
Houssem Aauar जीवनी - फेम कहानी कहानी:
जस्तै तिनीहरूले गरे कोरेनटिन टोलिसो, ओलम्पिक लियोनाइस १ 18 वर्षको भइसके पछि उनले आफ्नो सम्भाव्य क्षमतामा आँखा चिम्लेनन। त्यसैले, हौसेम अउरले २०१ 1 मा लिग १ क्लबसँग तीन वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। जबकि आइकॉनिक ड्रिब्लरले आफ्नो बुबा र आमालाई गर्व गर्दै थियो। पिचमा, आफ्नो परिवारको मूल देश (अल्जेरिया) बन्दुकको गलत अन्तमा छोडियो।
को पाइला पछ्याउँदै किलियन एमपीपी, Aauar आफ्नो ध्यान अल्जेरिया को सट्टा फ्रान्स को लागि खेल्नतिर लाग्यो। उनका निर्णयहरूले खेल विश्लेषकहरूको बीचमा धेरै प्रश्नहरू खडा गरे जो यसका बारे चिन्तित थिए राक्षस सम्भावित इलेवनको विश्व-स्तरका खेलाडीहरू (औउर लगायत) जुन उत्तर अफ्रिकी देशले हराएको थियो.
म यो बायो लेख्ने क्रममा, फ्रेन्च आउटकास्ट पनि करीम बेंजमा अल्जेरियाली राष्ट्रिय टोलीमा सम्मिलित हुन प्रशंसनीय प्रतिभालाई विश्वस्त पार्न कोसिस गरेको छ। फेरि, मरुभूमि फ्याक्सको प्रबन्धक, जामेल बेलमाडीले हौसेम औउरका आमा बुबाआमालाई अल्जेरियाका लागि विशेषता बनाउन मनाए। तथापि, Houss अझै पनि फ्रान्सेली टीम मा चिपके रहते।
हौसेम अउरको बायो - सफलता कहानी:
लिग १ मा उनको गौरवशाली आरोहण पछि, फिनसे शूटरलाई स्टारडमको यात्रा मात्र सुरु भएको थाहा थियो। यो नम्रता र समर्पण थियो जसले Aoar लाईयोनको शस्त्रागारमा अविभाज्य खेलाडी बन्न मद्दत गर्‍यो। उसको प्राविधिकता र कम्पोजरले उनलाई एक अजेय मिडफिल्डर बनायो जसले आपूर्ति गर्दछ मेम्फिस डिप्टी उत्तम गोल स्कोरिंग अवसरहरूको साथ।
जसरी अउर आफ्नो प्रशंसकलाई आफ्नो सम्भावना देखेर छक्क परिरहे, धेरै क्लबहरूले उनको हस्ताक्षरको लागि माग्दै गरे। आर्सेनलले उनलाई लगभग २०२०/२०१२ ग्रीष्मकालीन हस्तान्तरणमा हस्ताक्षर गरे तर यसको सट्टामा गए थमस पार्टी - केवल क्लबको निर्णयको लागि पछुतो गर्न सुरू गर्न। बदलामा, प्लेमेकरले आर्सेनलको बिन्ती इन्कार गरे - निराश भएर उसले २० 2021१ जनवरीमा लिओनलाई गनर्सको लागि छोड्ने आदेश दिए.
हुनसक्छ तपाईंले उसको खेल्ने शैलीमा थोरै ध्यान दिईएको छ। यसैले हामीले तलको क्लिप तयार गरेका छौं जुन उनको अविश्वसनीय फुटबल क्षमता र किन कारण हाइलाइट गर्दछ माइकल अर्टेटा सधैंभरि उहाँलाई प्रेम गर्नेछन्।
निश्चित रूपमा, Aauar र रियाद मह्रेज तपाईंको मनपर्ने भिडियो गेम - PS5 मा एक खूनी फिफा संयोजन बनाउनेछ। बाँकी, तिनीहरूले उनको जीवनी को भन्छन्, ईतिहास हो।
Houssem Aauar प्रेमिका र पत्नी हुन को हुनुहुन्छ?
सफल हुन र फ्रान्सेली फुटबल को विशाल मांग को लागी को लागी, धेरै प्रशंसकहरु को लागी सोध्नु पर्छ यदि उनको कोमल हृदयको पछाडि एक महिला छ भने। निस्सन्देह, उनको सुन्दर देखिन्छे एक केटीको प्रेमीका लागि उच्च।
जब म यो बायो लेख्छु, Aauar बहिरा कान बन्ने छ कि उनीसँग एक प्रेमिका वा पत्नी छ कि छैन भनेर सोधपुछ गर्न। हामी श suspect्का गर्छौं कि प्यारा मिडफील्डर एक सम्बन्धमा हुन सक्छ तर यसलाई सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्दछ, कम्तिमा अहिलेको लागि।
Houssem Aauar व्यक्तिगत जीवन:
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुहुन्छ के बनाउँछ च्याम्पियन्स लीग पुरस्कार मनोनीत धेरै विशेष? तपाईंलाई सत्य कुरा भन्नको लागि, Aauar को एक वफादार, सुरक्षात्मक र ख्याल राख्ने प्रकृति छ, त्यसैले किन उसले सजीलो मान्छेको भरोसा जित्यो।
पिच बाहिर, उनले शान्त जीवनलाई धेरै हतोत्साहित घटनाहरू रहित राख्छन् जसले उसको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्दछ। हामी उसलाई मैदानमा के देख्छौं सायद नदीको किनार र समुद्री किनारमा उनको पूर्ण सोचको उत्पादन हो जब कसैले पनि हेरिरहेका छैनन्।
जस्तै Benrahma भने, Houss उनी लुगा लगाउने तरीकाले सम्बोधन गर्न मन पराउँछन्। स्पष्ट रूपमा, उनको € १. million मिलियन (२०२० तथ्या )्क) को ठूलो तलबले उनलाई ठूला घरहरू, फेन्सी कपडाहरू र जुत्ता र कारहरू वहन गर्न सक्दछ। जे होस्, फुटबलर औसत जीवनशैली बाँच्न रुचाउँछन्।
मैले यो जीवन कहानी संकलन गर्दा, Aauar आफ्नो आमा संग बस्छ र आफ्नो छुट्टी को सबै भन्दा आफ्नो लियोन छरछिममा चिलिंग खर्च। उसको शब्दमा;
“म अझै पनि आफ्नो आमा संग बस्छु। सत्य यो हो कि उनले मेरो लागि सबै गरिन् र म उनको ठाउँमा ठूलो महसुस गर्छु। होनि, उनले मलाई सन्तुलन ल्याउँछिन्।
ठूला खेलहरूमा खेल्दा र पछि उनको ठाउँमा फर्केर मलाई मेरो खुट्टा मैदानमा राख्न अनुमति दिन्छ - त्यो महत्त्वपूर्ण छ। म मेरो नजिकको परिवारलाई धेरै दिन्छु। ”
Houssem Aauar परिवार जीवन:
हाउसले हामीलाई यस तथ्यलाई विश्वास दिलाउन लगाउँदछ कि घरमा बस्न सक्ने चीज उनीहरू कहाँ बस्छन् भन्ने नभई वरपरका मानिसहरू हुन्। सत्य भन्न सकिन्छ, यस फुटबलर आफ्नो परिवारका सदस्यहरु हरेक पटक आफ्नो सफलताको जश्न मनाउँदा अधिक कुशल महसुस। तसर्थ, हामी तपाईं Houssem Aauar बुबा, आमा र उनको बायो को यस खण्ड मा भाइबहिनीको बारेमा तथ्य ल्याउन।
हौसेम अउरकी आमाको बारेमा:
महान आमाले सफल फुटबलरहरू उत्पादन गरेका छन र हसको आमा एक अपवाद होइन। ऊ सानो बच्चा भएकोले उसले उसलाई स्याहार-सुसार गर्‍यो र सानो केटोलाई एउटा कमजोर अण्डाले पक्रेर राखी। आफ्नो छोरालाई फुटबलमा उत्कृष्ट बनाउन मद्दत गर्न, औरकी आमाले खेलका फाइदा र विपत्तिहरूको बारेमा जान्नुपर्‍यो।
उनको धारणामा, उनी आफ्नो छोराको लागि सबै भन्दा राम्रो सल्लाह प्रदान गर्न तयार हुनुपर्दछ जब खेलकुदको प्रतिक्रियै नमिल्ने भयो। Aauar को प्रगति निगरानी गर्दा, उनकी आमा उहाँसँगै २०१ Ball Ballon d'Or कार्यक्रममा पनि आउनुभयो। यस्तो सोचाइ कसले राख्ने छ कि मातृप्रेमले उनलाई नर्सको बावजुद फुटबलको बारेमा सिक्न बाध्य पार्छ?
हौसेम अउरका बुवाको बारेमा:
उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्नो छोरा स्टारडमको उदय हुनु अघि नै गुमनाम रहनुभयो। अवश्य पनि, आउरका बुबाले उसको पालनपोषणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुनुपर्छ। तपाईं उसकी श्रीमती अधिक गर्नुहुन्छ। घमन्डी बुबा अझै पनी आफ्नो प्यारो छोराको लागि सम्पर्कको विषय रहन्छन् जब पनि समस्याहरू गलत हुन्छन्।
Houssem Aauar भाई बहिनीहरू को बारे मा:
जसरी उहाँ आफ्नो बाबुको बारेमा मौन हुनुहुन्छ, त्यस्तै भाई वा बहिनीको अस्तित्वका बारे पनि सोधपुछ गर्दैछ। हुनसक्छ उसको बाँकी परिवार (उनकी आमा र हजुरआमा बाहेक) मिडियाको ध्यानाकर्षण नगरी अझ बढी निजी जीवन बिताउन चाहन्छन्।
Houssem Aauar नातेदारहरूको बारेमा:
के तपाईंलाई थाहा छ?… जबकि उनका बुवाले आफ्नो निजी जीवन सम्हाल्नुहुन्छ, हजुरबा हजुरआमाले छान्नुहुन्न किनकि उहाँ सोशल मिडियामा छालहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। जबदेखि होसले आफ्नो हजुरबा हजुरआमाको तस्वीर इन्स्टाग्राममा साझा गरे, धेरै प्रशंसकहरूले उनको बुढा मानिसलाई एक नातिनाको लागि दुर्लभ प्रतिभा भएकोमा सराहना गरे।
हौसेम अउर अनटोल्ड तथ्यहरू:
टेक्निकल dribbler को जीवन कहानी गोल गर्न, यहाँ केहि सत्यताहरू छन् जुन तपाईंलाई उनको बायोको पूर्ण ज्ञान लिन मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: क्यारियर दोस्रो आउँछ:
जहाँसम्म ऊ सफल क्यारियर तर्फ काम गर्छ, ओउरले हामीलाई यो बुझाइरहेको छ कि ऊ आफ्नो परिवार र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन्छ (पहिले) - कुनै पनि कुरा भन्दा पहिले। यदि तपाईंलाई थाहा थिएन, Aauar एक पटक Stade डी रेम्स मा खेल मा भाग लिन इन्कार गर्नुभयो किनभने उसले पिचलाई उसको फिटनेसका लागि एकदम खतरनाक ठान्दछ।
यद्यपि उसको क्लबले उनलाई उसको कार्यको लागि दण्ड दियो तर उसको परिवारले उनीहरुसँग त्यस्तो गलतफहमीको चरणमा उनीहरुलाई हौसला प्रदान गरे।
तथ्य # १: तलब ब्रेक डाउन र प्रति सेकेन्डको आय:
प्रति वर्ष € 1,500,000
प्रति महिना € 125,000
प्रति हप्ता € 28,802
प्रति दिन € 4,115
प्रति घण्टा € 171
प्रति मिनेट € 2.9
प्रति सेकेन्ड € 0.05
के तपाईंलाई थाहा छ?… औसत फ्रान्सेली नागरिकले लगभग साढे चार वर्ष काम गर्नुपर्नेछ आउरले महिनामा कमाएको पैसा कमाउन।
हामीले रणनीतिक रूपमा उसको तलबको विश्लेषणलाई घडीको टिकटको रूपमा राख्यौं। तपाईं यहाँ आउनु भएकोले आफूलाई कत्ति धेरै आयो भनेर खोज्नुहोस्।
तपाईंले Houssem Aauar हेर्न शुरू गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
हौसेम अउर फ्रान्समा मुसलमानहरुको 5.8..3.7% जनसंख्याको हिस्सा हो जुन करीव XNUMX. XNUMX. लाख मानिसहरु छन्। इस्लामको एक सदस्यको रूपमा, लियोन तारा कोडको पालना गर्दछ र आफ्नो धर्मको आचरण गर्दछ।
प्रतिस्पर्धी खेलहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ, औरले आफूलाई कम्प्युटर गेमहरूमा एक शक्तिशाली बलको रूपमा स्थापित गरेको छ। फ्रान्सेली मानिससँग समान फिफा सम्भावना साझा गर्दछ एडुआर्डो कामाविन्गा.
शुरूबाट, हौसेम आउवरको जीवनीले हामीलाई सिकाउँछ कि बच्चाको करियरको जग बसाल्ने प्रारम्भिक साथीहरूको प्रभाव (खेलकुदमा) सबैभन्दा प्राकृतिक तरिका हो। निस्सन्देह, फुटबल खेलेर परिवारको गठन गर्ने साथीहरूको समूहसँग सम्बन्ध राख्न चाहनाले हाम्रो केटोको भविष्य आकारमा परिणत भयो।
हामी हौसेम आउरकी आमालाई उनको प्रख्यात यात्राको लागि मातृ प्रेमको अविश्वसनीय प्रदर्शनको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौं। आफ्नो हजुरआमालाई बिर्सनु हुँदैन जसले आफ्नो नातिनातिनाको पालनपोषणमा भूमिका खेलेका छन्।
यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि हाम्रो टीमले तपाईंलाई तपाईंको अत्यन्त सम्मानित कथाको कथाहरूबाट सन्तुष्टि दिन खोज्छ फ्रेन्च फुटबलर खेलाडीहरू। कृपया हाम्रो साथ सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाइँ हाम्रो लेख मा कुनै पनि दुरुपयोग पाउनुभयो। अन्यथा, हाम्रो विकी तालिकामा उसको औवरको जीवनी सारांशको द्रुत भ्रमण गरेपछि एउटा टिप्पणी दिनुहोस्।
पुरा नाम: हौसेम अउर
जन्मस्थान: लियोन, फ्रान्स
नेट मूल्य: M २ मिलियन (२०२० तथ्या )्क)
वार्षिक वेतन: € १. million मिलियन (२०२० तथ्या )्क)
व्यवसाय: फुटबल खेलाडी (मिडफिल्डर)
पुर्व: अल्जेरियन मूल
उचाइ: 1.75 मीटर (5 फुट9मा)
लियोन फुटबल डायरी
शमूएल Umtiti बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
मेम्फिस Depay बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: डिसेम्बर २,, २०१ 24
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 21